Apple Watch Series 7 - Yakagadzirwa Senge IPhone 12 | TeraNews.net
Apple Watch Series 7 - iPhone 12-yakafemerwa dhizaini
Munyori Kravetz Pavel Yakabudiswa pa 08.12.2020
Kuvhurwa kweiyo iPhone 12 smartphone kwakaratidza kuti kambani ichine vagadziri Mushure mezvose, kwenguva yakareba zvakadaro, kuburitswa kwerudzi rwakafanana rwemafoni kwakaneta. Kunyangwe kufanana kwejajeti neiyo iPhone 4 hakuna kutyora idyll. Vatengi vakakwazisa chigadzirwa chitsva zvakanaka, zvisinei kuti vakanyora chii panhau dzenhau uye pasocial network. Iko kune kudiwa, kutengesa zvakare chiratidzo chikuru chemugadziri.
Asi iyo wachi haina kuchinja dhizaini yayo kubva musi wekuratidzwa kweApple Watch Series 4. Mavara matsva, zvishandiso - hongu. Uye dhizaini yakafanana. Uye, sekureva kwemugadziri Wilson Nicklaus, chitsva chinonakidza chakatimirira. Apple Watch Series 7 - dhizaini muchitaera cheIphone 12. Zvese zvinotaridzika zvakanaka mumifananidzo - maitiro ewachi akatonyanya kuomarara. Chaizvoizvo kune iyo nyowani smartphone.
Mushure mekunge iwo mafoto aiswa pasocial media, Apple yakagamuchira runyorwa rwemashoko asina kunaka. Vanenge makumi masere muzana evashandisi vanorota yeApple Watch ine yakatenderera kuratidza. Muenzaniso unopihwa Huawei Tarisa GT2 Proizvo zvinoshaya zvakajairwa iOS kutonga uye zviri nyore mashandiro. Uye zvakadaro, wese wechipiri mushandisi anonyunyuta nezvehupombwe hweApple Watch Series 2 maererano nemagetsi. Zuva nehafu hazvina kunyanyisa.
ThundeaL TD96 - $ 200 YakazaraHD Projector kubva kuChina
Google inoronga kutanga kugadzirwa kwema processor
Dyson V15 Tsvaga - chitsva chizvarwa vacuum cleaner
Huawei Dynacare Smart Turbo - shaver yemagetsi ye $ 35